SOMALITALK - CARAFA
Dhambaal Kusocda Shirka Nairobi
GOLAHA Wadatashiga Soomaaliyeed | SOMALI Consultative Council
G/W/S/002/04 London, 26/01/2004
Ujeedo:- Shirka Dib-u-heshiisiinta Soomaaliya Nairobi, Kenya.
Ku:- Madaxda ka qeyb galeysa Shirka dib-u-heshiinta Soomaalida.
Og: Urur gobaleedka IGAD
Og:- Beesha Caalamka
Ma dooneyno in aan dib ugu noqono taariikhda madow ee aad horseedka ugu noqoteen dadka iyo dalka Soomaaliyeed, haddii aad tihiin madaxda iyo hogaamiyayaasha siyaasadda Soomaaliya.
Nasiibdarro weli waxay maanta shacabka Soomaaliyeed ku sugan yihiin wixii ay ka dhaxleen dagaaladii qaraaraa ee dhiiga faraha badani ku daateen welina sii soconaya, Abaarihii ba'naa ee waxyeelada ba'ani u geystay wax soo saarkii dalaga beeraha, Nidaamka iyo kala dambeeyntii oo samada lagu laalay, Fowdo, Dil Dhac, Afduub lala beegsaday xubno aan waxba galabsan, Boob lagu hayo wixii ka haray hantidii Qaranku lahaa Qeyraadkii badda, Xoolihii Dhedigga ahaa iyo Duurjoogtii, Geed miroodkii beeraha sida Cambaha oo inta la dhuxuleeyo loo dhoofiyo wadamada Khaliijka, wixii ka haray wax soo saarka sunta warshadaha oo lagu aaso Soomaaliya.
Hadaba waxay noola muuqatay in aan idiin soo gudbino qoraalkan haddii aad tihiin madaxda iyo hogaamiyayaasha siyaasadda saldhig la'aanta noqotay ee Soomaaliya, Aabayaashii halaaga heysta Soomaaliya, Horseedayaashii sharaf la'aanta iyo dhaga xumida shacbigeenu la dhex wareegayaan shucuubta dunida.
Waxaan fileynaa in guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed maanta ka dheregsan yihiin waxa idiin diiday in aad gaartaan heshiis, taas oo aan fileyno in ay tahay cabsida aad ka qabtaan dhalasho qaran Soomaaliyeed ka dib in la idinku soo oogo godobtii iyo dhagarihii aad ka gasheen dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Intaas ka dib waxaan idiin soo direynaa salaan diiran, salaan ka dib waxaan idiinkugu baaqeynaa:-
Madaxda iyo Hogaamiyayaasha Soomaalida
1- In aad si kama dambeys ah u soo af jartaan khilaafka na dhaxalsiiyay qarannimo la'aanta daba dheeraatay ee aad weli dooneysaan in aad horseed ugu sii ahaataan dalka.
2- In aad ka garaadsateen, isla markaana la soo gaaray waqtigii aad uga garaabi laheydeen shacbigiina dhibaatada aad horseedka ugu noqoteen.
3- In aad garwaaqsateen sidii xal kama dambeys ah loogu heli lahaa dalka iyo dadka, loona dhameyn lahaa naceybka aad ku kala qoqobteen Soomaalida dhexdeeda.
4- In heshiisyada la gaaro noqdaan kuwo sidii loo galay loo fuliyo, haddii ay daacad idiinka tahay in Soomaaliya nabadoowdo.
5- In aad Ilaahay dartiis aad dadkiina aad horseed ugu noqotaan Caddaalad iyo sinaan taas oo aan fileyno in kama dambeystii dadku wada deeqi doonto.
Guud ahaan Shacbiga Soomaaliyeed
Waxaan hubnaa ka dib dhowr iyo tobon sanadood oo dagaalo idiin dhexmarayeen in aad garateen in kama dambeystii dagaalladu aaney xal u aheyn dhibaatooyinkii idiin dhexyiil sidaas darteed waxaan idiin kula talineynaa:-
1- In si wadajir ah looga hortago dagaallada aan wax macno ah sameyneyn marka laga reebo in lagu waayo wixii aad markii hore heysateen sida dadka iyo deeqaha idiinka kaga haray dagaallada sokeeye.
2- In khilaafaadyada sababa gacan ka hadalka la joojiyo, wixii dhibaato ah ee jirana lagu xalliyo walaalnimo iyo qaab nabadeed.
3- In guud ahaan la taageero nabadda laguna dadaalo is faham dhex mara qeybaha uu khilaafku ka dhaxeeyo taas oo aan rajeyneyno in ay wax ka badali doonto dhaqamadii foosha xumaa ee laga dhaxlay dagaalada sokeeye.
4- In si buuxda loo taageero dadaalada nabadda ee guud ahaan ka soconaya dalka Soomaaliya, sida dadaalka nabadeed ee qeybo ka tirsan bulshada ay horseedka ka yihiin, waxaa xusid mudan Abwaan Max'ed Ibrahim Warsame "Hadraawi" sida ay dhab uga tahay in nabad loo helo dalkiisa iyo dadkiisa Soomaaliyeed.
5- In shacbi ahaan aad banaanka ugu soo baxdaan idinka oo taageeraya nabad kama dambeys ah oo ka dhacda dalka isla markaana ka hirgasha guud ahaan dunida aynu ku nool nahay.
Intii ay socotay dhibaatada Soomaaliya waxaan ogsoon nahay in aan bulshada caalamka aysan shacbiga Sooamaaliyeed ka helin gacan wax ku ool ah oo la taaban karo, marka laga reebo is eedeed na gaarsiiyay halka aan maanta taagan nahay, sidaas darteed waxaan International Community-ga ugu baaqeynaa:-
1- In ay si buuxda u taageeraan shacbiga Soomaaliyeed.
2- In ay si buuxda uga qeyb qaataan dib u dhiska qarankii Soomaaliyeed ee burburay.
3- In ay gacan ka geystaan sidii loo soo celin lahaa sharcigii iyo kala dambeyntii la waayay, hubkana looga dhigi lahaa maxeysatada uu gacanta u galay.
4- In kooxdii is hortaagta dib u heshiisiinta la doonayo in la gaaro laga qaado talaabo dhab ah, tusaalana u noqota kooxaha kale ee ka jira dalka.
5- In aad dhexdhexaad ka noqotaan dhamaan khilaafyada u dhexeeya Soomaalida, isla markaana si wadajir u baadi goobtaan sidii xal kama dambeys ah loogu heli lahaa.
Nabad, Caddaalad iyo Midnimo.
QORAALADII HORE EE SACIID CALI